Fanahiana fandrobana sy hetsika tsy fahafaliana: niatrana sy niditra an-tsehatra teny amin’ny Ceni ny Emmo/Reg… | NewsMada
Fanahiana fandrobana sy hetsika tsy fahafaliana: niatrana sy niditra an-tsehatra teny amin’ny Ceni ny Emmo/Reg…
Tsy mandrimandry ny tanàna. Anisan’ny tazana teny amin’ny manodidina ny Ceni ny mpanao politika toa an-dry Rakotoarisoa Yves Aimé sy ireo namany, nitarika andiana olona sady nilanja sora-baventy. Anisan’ny fitakian’izy ireo ny handravana ny Ceni sy ny tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana mivoaka ao. Tsy izany ihany anefa fa mety misy ifandraisany amin’ilay hetsika nataon’ireo ambara fa olom-pirenena ny fepetra noraisin’ny fitondrana ka nampidirana an-tsehatra ny mpitandro filaminana teny Alarobia.
Tsy manaiky ny lesoka tamin’ny fifidianana
Nilaza ho tsy manaiky ny lesoka tamin’ny fifidianana teo ireto mitonona ho olon-tsotra ireto. « Nanentana ny namana tany anaty tambajotra sosialy izahay hitondra porofo amin’ny lesoka hitany sy niainany. Hetsika tsy hanohitra ny voka-pifidianana izao atao izao. Anjaran’ny kandidà izany fa ny olana tamin’ny tsy fahafahana nifidy, na koa nifidy fa tsy araka ny tokony ho izy ny ataonay. Tsy misy resaka kandidà ao ambadik’izao fa fahatsapana ny lesoka tamin’ny fifidianana », hoy ny mpandrindra, Raharison Thierry. Nambarany fa naneho hevitra sy nilaza ny tsy ara-dalàna izy ireo ary maro ny fitarainana voaray momba izany. Nanteriny fa maro ireo nahita tsy fetezana ka nijoro tamim-pahasahiana. Nomena sehatra nitenenana izy ireny. “Tsapanay fa miharatsy hatrany ny fikarakarana sy fanomanana fifidianana. Natao hanairana ny tompon’andraikitra ny hetsika manoloana ny tsy fangaraharan’ny fifidianana”, hoy ireto olon-tsotra ireto.
Tsy fahafaliana any anaty tambajotran-tserasera
Notanisaina tamin’izany ny fomba fanisana vato, tsy ahitana taratra ny mangarahara. Ny vokatra tsy mifanaraka amin’ny latsa-bato natao. Eo koa ny fizarana vola ho takalon’ny vato alatsaka… Mitonona ho tsy miaraka amin’ny kandidà izy ireo. Nilanja sora-baventy ny sasany. Nahazo ny kianja mitafon’Ankorondrano koa ireto mitonona ho olom-pirenena tsotra ireto tamin’izao hetsika izao.
Etsy andaniny, efa miely any anaty tambajotra any ny fahatezeran’ny olona sasany manoloana ny voka-pifidianana avy eny Alarobia. Tsy maintsy nandray fepetra, noho izany, ny eo anivon’ny Ceni ka niantso ny Emmo/Reg ialana amin’ny tampoka sy ny tsy ampoizina. Faritra mena rahateo ny eny amin’ity foiben’ny rafitra mpikarakara ny fifidianana ity.